Maqal: Faysal Cali Waraabe: Waxba Nooma Dhimayo Baarlamaan Isagaba La Ilaaliyo – Goobjoog News
Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka UCID ahna musharraxa madaxweyne ee xisbigaasi ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya aysan ka adkeyn dowlad goboleedyada dhismaya islamarkaana aynaan ka hadli karin arrinta Somaliland.
Waxa uu sheegay in baarlamaanka Federaalka Soomaaliya aanu ku dhisneyn sharci, islamarkaana aanu wax ka tari karin heshiiskii Somaliland ay la gashay dowladda Imaaraadka.
“Annagu kama mid nihin waxa aad dowladda ku sheegeyso, baarlamaanka aad sheegeyso waa midkii inta ay diideen baarlamaankii Jubbaland hadane iyaga oo u jeeda laga shaqeysiiyey, waqti bay iska khasaarinayaan waxba nama tari karaan, Muqdisho ayaa lagu ilaaliyaa” ayuu yiri Faysal Cali Waraabe.
Waraabe ayaa madaxda dowladda federaalka sida madaxweynaha, ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre iyo guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayuu dhaliiley siyaasaddooda.
Mjcefr tdodyc Cialis without rx cialis coupons
Hxeycy ttfbxl viagra online order cialis price
Uzxkei zannxi Buy pfizer viagra buy real cialis online
Ocrmen gnubfe Buy cialis online canadian pharmacy
Dhageyso: Ciidanka Xoogga Dalka Oo Xabsiga Dhigay Rag Hoggaaminayey Dagaallo Ka Dhacay Wanlaweyn